यस कारण अपांगता भएकाहरु पछि पदैछन्
रबिन थपलिया ः
अपांगता अधिकारको नाममा सरकार र राज्यले करोडौ खचिरहेको छ । प्राय सेमिनार र गोष्ठीहरु तारे होटल र क्याफेहरुमै हुनेगर्दछन तर पनि अपांगता भएकाहरु ठाँउको ठाँउमानै छन् । एक जना मेरा मित्र भन्दै थिए ।
दुई चार जना व्यक्ति र संस्थाले अपांगता आन्दोलनको नाममा ठेक्का पट्टाको जिम्मा लिदैमा अपांगता भएकाहरुले अधिकार पाँउदैनन भन्ने कुरा सरकारले हालै सार्वजनीक गरेको बजेट देखि सभासदको मनोनयन सम्मले पुष्टी गरिदिइसकेको छ ।
केहि दिन अघि रेडियो सगरमाथामा अन्तरवार्ताका लागि बक्ता नेपाल सरकारका सचिब तुलसी प्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी थिए । राजधानीको भौतिक संरचना कति अपांगता मैत्री भन्ने बिषयमा लिइएको सो अन्तरवार्ताको क्रममा सचिब सिटौलाले लगभग १० पटक जति अन्धो भएको व्यक्तिलाई यस्तो, लंगडोलाई यस्तो, लाटोलाई यस्तो भनेर भनिरहंदा राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन सुवेदीने अन्धो, लाटो, लंगडो जस्ता शव्दहरु सचिबले भनिरहंदा सचिब ज्यु यस्ता शव्दले अपांगता भएकाहरुको मन दुखाँउछ यि शव्दको सट्टामा दृष्टीबिहीन, शारीरिक अशक्त र बौद्धिक अपांगता भएको भन्दा राम्रो हुने थियो कि भनेर समेत भन्न सकेनन । उल्टै उनि भन्दै थिए सरकार संग खासै गुनासो गर्ने ठाँउछैन पुतलीसडकमा दृष्टीबिहिनहरुलाई हिडनको लागि सडक बत्ती छ अरु के के भन्दै थिए । सुदर्शन जी जस्ता हातका गन्न सक्ने केहि अपांगता भएकाहरुका लागि सरकारले धेरै गरिदिएको होला तर अधिकंस अपांगता भएकाहरु जो गाँउको दुर दराजमा छन उनिहरुको निम्ती सरकारले प्रत्याभुति हुने गरी खासै सुबिधा दिएको छैन् । सुबिधा केहि यस्ता अपांगता भएकाहरुले पाएका छन् जो सहरमा बसेर महासंघ र केहि नेतृत्व गर्ने संस्थाको दाहिना भएका छन् ।
तर नेपालका गाँउ गाँउ र कुना काप्चामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था हेरौ नेपाल सरकारले प्रत्यक बर्ष दिने अनुदान र आइएनजीओहरुले दिएको करोडौ डलर कहाँ र के का लागि खर्च भइरहेको छ ?
अझै भन्नुपर्दामा अपांगताको बिषयमा कलम चलाउने म जस्ता धेरै संचारकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय अपांग महासंघले गर्ने औपचारीक कार्यक्रमको बारेमा खवरै हुदैन् । किनकी हामी अपांगता भएकाहरुको नाममा आउने पैसा सेमिनार र गोष्ठीमा खर्च नगरौ दुईवटा भएपनि ह्यिलचेयर र वैशाखी किनेर बाँडौ भन्ने बिचार राख्ने भएका कारण ।
यस्को मतलब हो राष्ट्रिय अपांग महासंघलाई केहि व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थमा प्रयोग गरिदैछ । आफनो संस्थालाई बजेट माग्न सरकारी अधिकारी र राजनैतिक व्यक्तिहरुको चाकडी गर्ने प्रबृत्तीले समग्र अपांगता भएकाहरु पिडीत बनिरहेका छन् । कयौ बैसाखी र दृष्टीबिहीनले प्रयोग गर्ने क्यान नभएर हिडडुल गर्न सकिरहेका छैनन् कयौ ह्यिलचेयर नभएर हिडन पाएका छैनन् केहि यस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरुछन उनिहरुको दैनिकी एउटा सम्पन्न मानिसको भन्दा फरक छैन् ।
अपांगताको बिषयमा कलम चलाउने एउटा संचारकर्मी भएको नाताले मेरो अनुभबले बताएको छ कि अव अपांगता भएकाहरुलाई अरु सवल व्यक्तिले होइन अपांगता भएकाहरुलेनै ठगी गरीरहेका छन् । चाहे अधिकारको नाममा होस चाहे अन्य कुनै बिषयमा ।
अहिले धमाधम सभासदको मनोनयन गर्ने बेला भइरहेको छ । नेपालको जनसंख्याको २ प्रतिशतको संख्यामा रहेका अपांगता भएकाहरु रोई कराई हामीलाई सभासदमा आरक्षा गराइदेउ भन्दै नेताको घर दैलो चाहादै हिडनु परिरहेको छ । अपांगताभएकाहरुलाई आरक्षण किन हुन सकेन ? हामी अरुलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिला आफैलाई हेरौ हाम्रा कार्यक्रमहरु कस्का लागि लक्षीत छन् ? हामी कस्को स्वार्थका निम्ती हिडी रहेका छौ ? केहि आफना आसेपासे र धुप्रौरेलाई बोलाएर भजन गाँउदैमा हाम्रा अधिकार कसैले पोल्टामा ल्याएर राखिदिन्छ ?
अपांगतालाई राजनीतिमा आरक्षण नहुनुको मुख्य दोसी राष्ट्रिय अपांग महासंघ हो । महासंघले एडभोकेसीको नाममा गर्ने बर्षमा करोडौको खर्च कहाँ र कस्का निम्ती खर्च भइरहेका छन् ? महासंघका अहिलेको नेतृत्वले गर्ने एडभोकेसी अव सव वाहियात सावीत भइसकेको छ । चाहे बजेट भाषण होस, चाहे सभासदको मनोनित होस या अरु कुरामा ।
गत बर्ष सरकारले सबै प्रकारको अपांगता भएकाहरुलाई सामाजीक सुरक्षा भत्ता दिने बजेटभाषणमानै भनेको थियो तर सरकारका केहि कर्मचारीहरुले सवै अपांगतालाई होइन प्रिन्ट मिस्टेक भएकाले त्यसो भनिएको भन्दै सामाजीक सुरक्षा भत्ता समेत खोसीयो ।
आरक्षणको नाममा हुने कयौ बिज्ञापनमा अपांगताभएकाहरुलाई कोटा समेत नराखी आबेदन मागीन्छ तर काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा रहेको अपांग महासंघलाई थाहै हुदैन् । महासंघका पदाधीकारीहरु देश बिदेशका सेमिनार र गोष्ठीमा पुग्न भ्याइनभ्याई छ बिचर ति गाँउमा थुनिएर बसेका अपांगताको बिषयमा कस्ले टाउको दुखाउने ?
अहिलेको बास्तवीक यथार्थ यहि हो यथार्थ तितो लाग्न सक्छ तर कसैलाई तितो लाग्छ भने लागोस, यथार्थ बोल्दा र लेख्दा एकलै भइन्छ भने पनि भइयोस तर यथार्थ कुरा कोहि कसैको दवाव र ललिपपमा भुलिएर लुकाइदैन् ।